Isaphulelo se-EPS izinto zokwenza izinto kunye neFektri Xiong Ewe
I-EPS (eyandisiweyo yePoly Styrene) yinto elula, engqongqo, yeplastiki yokufakelwa kwamagwebu eveliswe kwizicatshulwa eziqinileyo zepolystyrene. Ukwandiswa kufezekiswa ngenxa yamanani amancinci erhasi yepentane enyibilikiswe kwiziseko zepolystyrene ngexesha lokuvelisa. Irhasi iyanda phantsi kobushushu, isetyenziswe ngomphunga, ukwenza iiseli ezivaliweyo ze-EPS. Ezi iiseli zihlala malunga namaxesha angama-40 umthamo webala le-polystyrene yoqobo. Amaso e-EPS emva koko abunjwe kwiifom ezifanelekileyo ezifanelekileyo kwisicelo sawo. Iimveliso ezenziwe nge-polystyrene ene-foam ziphantse zafumaneka kuyo yonke indawo, umzekelo, ukupakisha izinto, ukugquma, kunye neekomityi zokusela amagwebu
EPS izinto EPS ekrwada izinto:
Izinto ze-E-standard grade yi-EPS eqhelekileyo esetyenziswa ngokubanzi, ilungele oomatshini bokwenza i-vacuum ngokuzenzekelayo, oomatshini bokwenza umbane, kunye nokuphakamisa oomatshini bokushicilela bendabuko. Ngumgangatho oqhelekileyo wokugawula impahla eluhlaza, enokuthi yenziwe amagwebu ukufezekisa amagwebu alula ngexesha. Ngokubanzi, ilungele ngakumbi iimveliso ezinenqanaba elinamagwebu le-13 g / l okanye nangaphezulu. Isetyenziswa ngokubanzi kwiipakethe zombane, izinto zokugquma nge-thermal kunye nokuloba. , Imisebenzi yezandla, imihombiso, ukulahleka kwamagwebu, njl.
1. Isantya esiphuphuma amagwebu;
2. Umgangatho wegwebu osemgangathweni (umyinge ungaphantsi kwezinto zeP);
3. Ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi kunye nokugcina umphunga;
Ixesha elifutshane lokuphilisa kunye nomjikelo wokubumba;
5. Imveliso ine-sinterability elungileyo;
6. Umphezulu ogudileyo;
7. Ubungakanani buzinzile, amandla aphakamileyo, ukusetyenziswa kwawo kunamandla, kwaye imveliso ayilulanga ukuncipha kunye nokukhubazeka.
IBakala Chwetheza Ubungakanani (mm) Ireyithi yokwandiswa (kube kanye) Ukusetyenziswa
E kwinqanaba E-101 1.30-1.60 70-90 Ukupakishwa kombane yodongwe, iibhokisi zokuloba, iibhokisi zeziqhamo, iibhokisi zemifuno, iiflothi, imisebenzi yezandla, amagwebu alahlekileyo, njl.
Flame nekudodobalisa grade EPS izinto ekrwada:
F-nelangatye nekudodobalisa grade sele kudlule US uvavanyo uvavanyo lokhuseleko elebhu (ul) isatifikethi, inombolo yoxwebhu inombolo E360952. F-nelangatye nekudodobalisa grade kufuneka bakuphephe ukuxubana non-nelangatye nekudodobalisa izinto kwinkqubo yokulungisa, kwaye ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe ukuba ukuxubana EPS eziqhelekileyo. Ezi ndlela zokwenza okungalunganga ziya kunciphisa ukusebenza kwedangatye. Imigangatho yesizwe e-F-flame yokudodobalisa efanelekileyo yile: i-polystyrene foam ebunjiweyo (GB / T10801.1-2002); izinto zokwakha kunye neemveliso ukutshisa ulwahlulo lwentsebenzo (GB8624-2012). Ukufumana i-B2 flame retardant performance, ixesha elithile lokuguga kufuneka linikezelwe kwimveliso ebunjiweyo ukuvumela intsalela yegwebu ukuba ibaleke emzimbeni wegwebu. Ixesha lokuguga lixhomekeke ikakhulu kumxholo wearhente egwebu, ubungakanani obubonakalayo, ubungakanani bemveliso kunye nezinye iimeko zikwindawo enomoya, le datha ilandelayo iyacetyiswa kwimveliso zamaphepha:
20mm ubukhulu, ubuncinci iveki enye yokuguga i-20mm ubukhulu, ubuncinci iiveki ezimbini zokuguga
I-30 KG / M³:
50mm ubukhulu, ubuncinci iiveki ezimbini zokuguga ezingama-50mm, ubuncinci iiveki ezintathu zokuguga
1. Ukusebenza okuhle kwedangatye;
2. Isantya saphambi kokukhutshwa;
3. Izinto eziluhlaza zinobungakanani bamasuntswana obufanayo kwaye amaso anegwebu anokuhamba kakuhle;
4. Uluhlu olubanzi lokusebenza, olulungele oomatshini bokwenza ipleyiti ngokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo;
5. Amaso egwebu aneeseli ezintle nezilinganayo, kwaye ukubonakala kwemveliso kugudile kwaye kucaba;
6. Imveliso inokuzinza okuhle, ukubambelela okuhle, ubunzima obomeleleyo kunye namandla aphezulu;
7. Umyinge wexesha elandisiweyo lokwandiswa kwamaxesha ngama-35-75;
8. Ilungele iB2 izinto zokwakha ezisemgangathweni.
Ibanga F F-101 1.30-1.60 70-90 Izinto zokwakha, ukufudumeza ubushushu kunye nokupakishwa kombane weceram
Egqithileyo Ukunyanzeliswa koGwebu
Okulandelayo: Ibhloko ye-ICF